Fananganana Tana-masoandro :: Miahiahy amin’ny ho aviny ireo tompon’ireo tany hototofana • AoRaha
Fananganana Tana-masoandro Miahiahy amin’ny ho aviny ireo tompon’ireo tany hototofana
Miahiahy ny tompony sy mampiasa ny tany ary ireo manana trano voakasiky ny fananganana ny Tanà-Masoandro. Nihetsika ihany koa ny mponina, tetsy Zaivola, niaraka tamin’ny mponina tetsy Ambohitrimanjaka.
Misy trano tsy maintsy harodana sy tanimbary hoto­tofana ihany koa eny an-toe­rana. Toherin’ireo mponina anefa izany toe-draharaha izany. « Tsy nivarotra tanindrazana mihitsy aho na dia nanana olana goavana aza teo aloha teo. Alaina aminay indray anefa ny taninay, amin’ izao fotoana izao. Tsy amidy na hatakalo ny taninay fa efa teto ny androantokom-piai­nanay. Raha hanangana ihany tokony hataon’ny fanjakana any amin’izany toerana hamin­drana anay izany », hoy ny antsoantson’ireo mponina.
Nanamafy anefa ny avy ao amin’ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy hiro­soana ny fanatanterahana ny asa. Efa nekena ny hivoahan’ny ampaham-bola hanaovana ny Tanà-Masoandro, izay hampi­­fandray an’Antananarivo renivohitra, Ambohidratrimo ary Atsimondrano. Tsy maintsy misy ny asa dingana voalohany vita mialoha ny faran’ity taona ity, toy ny fanotofana ny tany. Efa manao tombam-bidy ireo tany voakasika rehetra ankehitriny ny kaomisionina mpanao ny tombana. « Voahaja mana­raka ny lalàna ny zon’ny tompon-tany sy trano ary ny olona miasa amin’ny toerana voa­kasika. Hisitraka tombontsoa manokana izy ireo amin’ny fanatanterahana ny tetikasa. Horaisin’ny fanjakana an-tanana ny fanonerana ny very rehetra. Mitohy mamboly kosa ireo mpamboly tsy voakasiky ny fanotofana », araka ny fana­zavana avy ao amin’ny Fiadi­diana ny repoblika.
Tsiahivina fa nisy ny fampahafantarana misimisy kokoa ny tetikasa tamin’ireo orinasa mpanorina sy mpanao asa vaventy eto Madagasikara ary ireo mpiara-miombon’antoka tamin’ny herinandro lasa teo, teny Ambohitsoro-hitra.
Fampianarana ambony :: Ambony ny filàna mpampianatra mpikaroka eny amin’ny oniversite